पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा किन जोडिए रवी लामिछाने ? | NepalDut
पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा किन जोडिए रवी लामिछाने ?
केही दिन अघि पत्रकार शालिकराम पुडासैनी २०७६ साउन २० मा चितवनको होटल कंगारु कोठा नं. २०२ मा मृत भेटिए। त्यो मृत्यु स्वभाविक देखिँदैन।
कुनैबेला रहस्य र सनसनीपूर्ण खोजको पर्दाफास गर्ने शालिकरामको मृत्यु आफैँ रहस्यको विषय बनेको छ। प्रहरीसहित सरकारी निकाय उनको अस्वभाविक मृत्युको पर्दा उघार्न काम गरिरहेका छन्।
घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरु कुनैबेला उनैले काम गरेको कार्यक्रम ‘सिधाकुरा जनता’ सँग उनको मृत्युको कारण जोडिएको बताउँछन्।
‘आत्महत्या हो कि हत्या भन्ने निक्र्यौल पोष्टमार्टम रिपोर्टपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी दानसिंह मल्ल नेपालखबरसँग भन्छन्, ‘उहाँ (शालिकराम) को मोबाइल परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाएका छौं। त्यो सबैको ल्याब टेस्ट भइसकेपछि थप कुरा खुल्नेछ।’
एसपी मल्लले शालिकरामको साथबाट अन्य थप सामाग्री समेत बरामद भएको जानकारी दिए। उनकाअनुसार शालिकरामको मोबाइलमा केही विषय भेटिएका छन्। तिनलाई गोप्य राखेर प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको हो।
मोबाइलमा रहेको भिडियोमार्फत् शालिकरामले आफ्नो मृत्युको रहस्यबारे बोलेको चर्चाहरु छन्। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरु समेत यही बताउँछन्।
भिडियोमा उनले मृत्युको कारक बनेका व्यक्तिहरुबारे समेत खुलाएका छन्। एसपी मल्लको भनाइले पनि सो कुराले पुष्टि गर्छ।
‘मोबाइलमा केही विषयहरु भेटिएका छन्। त्यसअनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ। ती व्यक्ति, विषय र मोबाइलको वैज्ञानिक र प्राविधिक जाँचपछि मात्र विस्तृत कुरा आउँछ’, एसपी मल्ल भन्छन्।
शालिकरामको मृत्युको पछाडि ‘सिधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका सञ्चालक रवि लामिछाने र निर्माता दीपक बोहराको नाम जोडेर चर्चा भइरहेको छ। स्थिति निकै असहज बन्दै गएपछि बुधबार लामिछानेले फेसबुकबाट एउटा प्रत्यक्ष भिडियो सन्देश नै दिए। त्यसमा उनले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुको खण्डन गरेका छन्।
२१ मिनेट ३६ सेकेण्ड लामो भिडियोमा उनले शालिकराम आफूहरुको टिमबाट हाँसीखुसी बिदा भएको र उनको मृत्युले आफूसहित सिधाकुरा टिम दुःखी रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘शालिकराम एकजना युवतीसँग सम्बन्धमा थिए। उनलाई ती युवतीले केही बिषयलाई लिएर निरन्तर तनाब दिइरहेकी थिइन्’, रविले भिडियोमा भनेका छन्।
‘केही विषयहरु हामीसँग प्रमाण सुरक्षित छन्,’ लामिछानेले भिडियोमा भनेका छन् ‘त्यही विषयका कारण उनले आत्महत्या गरेको हुनसक्छ।’ ती प्रमाण के हुन् र त्यो सम्बन्ध के हो भन्नेबारे उनले सार्वजनिक गरेका छैनन्।
‘सिधाकुरा जनतासँग’का निर्माता दीपक बोहरा आफ्नै टिममा काम गरेका शालिकरामले अरुले भनेका विषय पत्याउँदा घटना भएको अनुमान गर्छन्। सँगै काम गरेको साथी भए पनि अप्ठ्यारो पर्दा हामीलाई एक कल फोन नगरेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे।
‘कसैले धम्काएको हो कि भन्ने आशंका छ,’ बोहरा भन्छन्,‘यो विषयमा मलाई एक कल फोन गरेको भए सबै छर्लङ हुने थियो।’
सोमबार कंगारु होटलमा बस्नु अघि शालिकराम अन्य होटलमा समेत गएका थिए। उनी कोठा खोज्नका लागि गएको प्रारम्भिक सोधपुछबाट खुलेको छ। घटनाका विषयमा चितवन प्रहरीले शालिकरामको कल डिटेल समेत लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।